Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda oo ku dagaalamay dagmada Jalalaqsi – Somali Top News
Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda oo ku dagaalamay dagmada Jalalaqsi
October 6, 2019 Somali Top News	0 Comments Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda oo ku dagaalamay dagmada Jalalaqsi
Wararka laga helayo degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas saakay uu ka dhacay dagaal u dheexeya Ciidanka AMISOM gaar ahaan Jabuuti iyo Ciidamo ka amar qaata maamulka Degmadaas.
Dagaalkan oo ahaa mid kooban ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Ciidanka Jabuuti ay isku dayeen inay demiyaan Xarunta Shirkada Isgaarsiinta Hormuud xili ay doonayeen in howlgal Miino baaris ah ay sameeyaan,hayeeshee arrintaas ay ka hor istaageen Ciidanka maamulka Degmada Jalalaqsi.
Dadka deeagaanka ayaa waxaa ay sheegeen in labada Ciidan ay isdhaafsadeen rasaas xoogan oo sababtay Khasaaro,in kastoo aysan Cadeyn karin inata uu la egyahay.
Wararka ayaa inatasi waxaa ay ku darayaan in Ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti iyo Ciidanka Jalalaqsi ay isku hor fadhiyaan halkaas,isla markaana marar qaar la maqlayo rasaas goos-goos ah.
Ciidanka Jabuuti ayaa saakay doonayay in howgal miino baaris ah ay ka sameeyaan duleedka Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan,iyagoona xiliyada ay howlgalada sameeyaan la demiyo Anteenada Isgaarsiinta Shirka Hormuud.
← Cali Khaliif Galeyr oo caleemo saarka Axmad Madoobe ka qeyb galaya
Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo Jalalaqsi ku dhexmaray AMISOM iyo ciidamada dowladda →
May 27, 2019 May 27, 2019 Somali Top News 0
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay guddoomiyaha ururka ONLF
Hanaanka Gal-Dacwadeedka Electarooniga Oo La Daahfuray